शर्तमा जर्मनी जर्मनीमा लामो समयदेखि वैधानिक, यथोचित वैध, स्थिति नभएको थियो। लामो समयको लागि, कतै 2008 र 2012 को दायरामा, सट्टेबाजीलाई राष्ट्र सरकारले वास्तवमै अवैध घोषणा गरेको थियो। भाग्यवस, क्लबका लागि सम्भवतः गडबड गर्ने प्रशंसा गर्ने जर्मनका लागि, यो अब सत्य हुँदैन।
हाल, खेलाडीहरू संसारभरिबाट अनलाइन जुवा क्लबहरूमा खेल्न सक्छन् र शीर्ष गुणस्तरको प्रशंसा गर्दछन् NetEnt तिनीहरूको घरको आरामबाट वा हतारमा खेलहरू।
यस पृष्ठमा, हामीले राम्रो जर्मन जुवा क्लबहरू भेला गरेका छौं जसले जर्मनीबाट नयाँ खेलाडीहरूको लागि शीर्ष स्वागत बन्डल प्रस्ताव गर्दछ। तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्, र जर्मन जुवा क्लबहरूका लागि हाम्रो सुविधाजनक म्यानुअल, तल।
जर्मन खेलाडीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो
जर्मन खेलाडीहरूको लागि पहुँच योग्य जुवा क्लबहरूको मात्रा अहिलेको रूपमा विशाल छ, यद्यपि यसले थप चरणबद्ध रूपमा विकास गर्दैछ। यसले सबै भाग्यशाली जर्मन खेलाडीहरूले ब्राउज गर्न गन्तव्यहरूको एक विशाल रकमको स .्केत गर्दछ, यद्यपि यसले यस्तै रूपमा संकेत गर्दछ कि उनीहरू निर्णयबाट थकित हुन सक्छन्। अफ मौकामा कि त्यहाँ धेरै संख्यामा छनौट गर्ने अवसरहरू छन्, तिनीहरूलाई कहाँ सुरु गर्न सल्लाह दिइनेछ?
सबै कुरा विचार गरीन्छ, यहाँ नेटएन्ट क्यासिनोमा हामी यो सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं कि बाजी जर्मन क्लब लिने तर्फ बाटो सहजै छ जुन अनुमति दिन सकिन्छ। यही कारण हो कि हामीले सबै राम्रा जर्मन अनलाइन जुवा क्लबहरू एक साथ भेला गरेका छौं, र तिनीहरूलाई तपाईंसँग एक सरल, उचित र उपलब्ध तरीकामा परिचय गराएका छौं। जर्मन क्यासिनो बोनस
हामी उनीहरूको बारेमा यत्ति अविश्वसनीय के छ भनेर ठ्याक्कै सुबिधा लिन गइरहेका छौं, के अभावहरू छन्, के पुरस्कार र प्रगतिहरू प्रस्तावमा छन् र कुनमा तपाईं सबै अद्भुत नेटएन्ट खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ।
जर्मन नेटएन्ट क्लब हाम्रो विशेषताहरू मध्ये एक हो, यी गन्तव्यहरूमा उत्तम डाटाका लागि तपाईंले अरू कतै जानु पर्दैन।
महिनाको जर्मन क्यासिनो
हामीले भने जस्तै, जर्मन क्लबको एक ठूलो रकम त्यहाँ उत्साही जर्मन खेलाडीहरूको उपयोगको लागि बाहिर छ, यद्यपि तिनीहरू बीच छनौट गर्न गाह्रो छ। हाम्रो जर्मन perusedrs को लागी एक एकदम सरल मार्ग उत्तम जुवा क्लब छनौट गर्नु हाम्रो महिनाको जर्मन क्लब संग पछिल्लो संग रहन छ।
कुन क्लबमा जुन जुन महिनामा यसलाई मनोरन्जन केन्द्रबाट बाहिर निकाल्दै छ भन्ने बसोबास गर्न, हामी हाम्रो निर्णयलाई ठूलो मापदण्डको बहुमतमा निर्भर बनाउँदैछौं, तैपनि हामी अतिरिक्त रूपमा केही अतिरिक्त मापदण्डहरू पनि समावेश गर्दछौं विशेष गरी हाम्रो जर्मन प्रशंसकहरूको लागि।
महिनाको जर्मन जुवा क्लबहरू एक गतिशील कम्पोनेन्ट हुनेछ, त्यसैले निरन्तर हामी प्रतिस्पर्धीहरूको पर्याप्त संख्याको स्थितिलाई पुन: मूल्याsess्कन गर्नेछौं र फेरि एक पटक छनौट गर्नेछौं। यसको मतलब यो हुनुपर्दछ कि लगातार त्यहाँ चम्किलो नयाँ जुवा क्लबहरू हुनेछन् - वा उस्तै सम्भावना हुने अफ अफ मौकामा कि उनीहरू भरपर्दो असाधारण छन्।
तपाईंको मनपर्ने खेलहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ जर्मन पेपैल क्यासिनो
जर्मनीमा सर्वश्रेष्ठ पेपैल क्यासिनोहरू मात्र होइन हामी तपाईंलाई सब भन्दा राम्रो र ठूला जर्मन जुवा क्लबहरू, वा महिनाको सर्वश्रेष्ठ जर्मन क्लब प्रस्तुत गर्ने छौं, तर अर्कोतर्फ हामी तपाईंलाई सर्वश्रेष्ठ जर्मन पेपैल जुवा क्लबहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यो हो, उत्तम जर्मन क्लबले तपाईंलाई PayPal को साथ खाता प्रबन्ध गर्न सक्षम गर्दछ।
पेपैल द्रुत गतिमा जुवा क्लब उद्योगमा सबैभन्दा प्रसिद्ध किस्तमा र फिर्ता निकाल्ने रणनीति मध्ये एक हुन गइरहेको छ, र जर्मनी यो मापदण्डमा कुनै विशेष केस छैन।
PayPal यति प्रसिद्ध छ कि स्पष्टीकरण, जर्मन क्लब मा यस प्रकार मूलधार, यो एक लामो शट द्वारा छ कि दुनिया को सबैभन्दा ठूलो ई-वालेट। सबै साइटहरूका बारे अनलाइन हाल पेपैललाई एक किस्तमा प्रविधिको रूपमा स्वीकार्दछ, त्यसैले यो फेरि कहिले पनि सीमित eBay मा सीमित छैन।
केवल यो सबैभन्दा ठूलो होईन, तथापि यो प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा सिधा हो - पेपैल मार्फत पैसा चलाउन र बचत गर्न पूर्णतया सजिलो छ।
तपाईंले सजिलै पेपैलको प्रयोग गरेर 'स्टोर' निचोड गर्नु पर्छ, तपाईंको PayPal प्रयोगकर्तानाम र गोप्य वाक्यांश प्रविष्ट गर्नुहोस्, र भोईला तपाईंले भुक्तान गर्नुभयो।
तपाईं PayPal को बारे मा प्रगतिपुस्तक हाम्रो किस्त तकनीक पृष्ठहरु मा एक किस्त रणनीति को रूप मा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी बहुमत कोणहरू PayPal लाई विस्तृत रूपमा विस्तृत गर्दछौं, अन्य अतुलनीय हाइलाइटहरूको बहुमत चित्रण गर्दै।
थप रूपमा, तपाईं तल हाम्रो जर्मन क्लबको रुन्डउन प्लेयरहरूलाई पेपैलको प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
के जर्मन अनलाइन क्यासिनो विश्वसनीय छन्?
अनलाइन जुवा क्लबहरूमा खेल्दा धेरै ट्रिगर व्यवसाय हुने गर्थ्यो, वर्तमानमा रहेका धेरै नै बिरामी परम्परागत क्लबहरू थिए, र वेबमा सबै थोरै सुरक्षित गरिएको थियो।
भाग्यवस, फायरवालहरू, ईन्क्रिप्शन प्रोग्रामिंग र मालवेयर बीमा अब व्यापक रूपमा सुधारिएको छ, त्यसैले तपाईंको सूक्ष्मतालाई ... वा विश्वको सबैभन्दा ठूलो जर्मन क्लबको सर्भरहरूमाथि आक्रमण हुने डरलाग्दो घटनाहरूको प्रायः अवसर छैन। होस र, यो त्यस्तो कुरा होइन जुन हामीले सबैले बेवास्ता गर्न थाल्नुपर्दछ, सत्य हुनुपर्दछ र ती कुराहरूमा ध्यान दिनुहुन्न।
त्यसलाई ध्यानमा राख्दै, हामी यहाँ नेट इन्ट्याकासिनोमा ग्यारेन्टी दिनेछौं कि हामी तपाईंलाई त्यहाँ बाहिर सबैभन्दा सिधा-एज जर्मन जुवा क्लबहरूको साथ प्रस्तुत गर्दछौं। हामी जुवा क्लबहरू मध्ये प्रत्येकमा सुरक्षा र भलाइ छानबिन गर्न हामी कडा प्रयत्न गर्नेछौं जुन हामी अडिट गर्छौं र हामी तपाईंलाई के विचार गर्छौं त्यसको वैधानिक मूल्यांकन दिन्छौं।
जर्मन क्लबको निर्भरता सर्वेक्षण गर्न हामी यसमा लि g्ग लिनेछौं:
जर्मन क्लबसँग इजाजतपत्रहरू छन्, जसले तिनीहरूलाई विशेष जिल्लाहरूमा काम गर्न सक्षम गर्दछ, र जसले उनीहरूका खेलाडीहरूको लागि वैध आश्वासनहरू सुरक्षित गर्दछ।
ग्राहकको फाइदाहरू जुन साइटमा पहुँचयोग्य छन्, र कसरी ती द्रुत र पर्याप्त रूपमा तिनीहरूले ग्राहक मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्छन्।
कस्तो प्रकारको ईन्क्रिप्शन जुन क्लबले प्रयोग गर्दछ, र यसले सुरक्षित प्रोग्रामिंग होस्ट गर्दछ।
जर्मनीमा क्यासिनोको इतिहास
जर्मनीमा सट्टेबाजीको छँटाइ इतिहास एक अस्पष्ट कानून हो, सर्तित वैध परिस्थितिहरू, र अस्पष्ट बजारबाट बढ्दो स्पष्ट वैधतामा परिवर्तन हो।
जर्मन एक्सएनयूएमएक्स अलग राज्यहरुबाट बनेको छ, र कानूनले यी राज्यहरुमा सट्टेबाजीको वैधानिकताका साथ पहिचान गरीरहेको छ ती दुवैलाई ग्लोकस्पीस्पेलिएस्टस्वेट्रग भनिन्छ। ग्लुक्स्पीस्पेलस्टसवेट्रगलाई 16 मा पुष्टि गरियो र आज लगातार नयाँ संशोधन र प्रेसिफिकेशन्सको साथ लगातार ताजा छ।
जर्मन भाषामा खेलाडीहरूलाई स्थानीय रूपमा शर्त लगाउन अनुमति दिइएको छ तर यो शर्तमा भाग लिनको लागि वास्तवमा अनुमति छैन भन्ने आधारमा अझै अवस्था छ। यद्यपि शर्त अवैध छ भनेर रेकर्ड गरिएको छ भन्ने तथ्यको बाबजुद, तिनीहरूले जर्मन बाहिरको राष्ट्रमा भर्ना गरिएको साइटमा यो सम्भावनाको अवसरमा, ठीक छ। सत्य भन्नु हुन्छ, एक धेरै धेरै जर्मन मूल निवासीहरु लगातार शर्त, त्यसैले कानून खुला ब्याज पछाडि वर्तमान मा छ।
उदाहरणका लागि, एक्सएनयूएमएक्समा, पियस हेन्जले पोकरको विश्व व्यवस्था जित्यो, यद्यपि उनलाई पोकर खेल्नु अवैध नै थियो, निश्चित रूपमा पुरानो जर्मन कानूनको परिणामस्वरूप।
जर्मन मोबाइल क्यासिनो र मोबाइल खेलहरू
जर्मन पोर्टेबल जुवा क्लबहरू अनलाइन सबैभन्दा उत्कृष्ट क्लबको आजकल उनीहरूको क्लबको बहुमुखी संस्करणहरू हुनेछन्, जसको अर्थ तपाईसँग जर्मनीमा भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि उत्तम नेटटेन्ट खेलहरूको सराहना गर्ने विकल्प हुनेछ। चाहे तपाई काम गर्न यातायातमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाई मनोरन्जन केन्द्रमा आफ्ना साथीहरूसँग कडा बसिरहनुभएको छ, वा नगरको वरिपरि तपाईको डाँठ घुम्दै हुनुहुन्छ कि, जबसम्म तपाइँसँग वेब संबद्धता छैन, त्यस बिन्दुमा तपाई। यी जर्मन बहुमुखी जुवा क्लबहरूमा खेल्ने विकल्प छ।
जर्मन बहुमुखी जुवा क्लबहरू सामान्यतया दुई प्रकारका साथ हुन्छ: पोर्टेबल अपग्रेड गरिएको लोकेल वा समर्पित अनुप्रयोगहरू।
बहुमुखी सुव्यवस्थित लोकेलहरू वास्तवमा उनीहरू जस्तो लाग्छ - मोबाइल फोनका लागि तपाईंको मनपर्दो जर्मन जुवा क्लबहरूको पुनःनिर्माण।
यी नयाँ गन्तव्यहरू छैनन् जहाँ पहिलो गन्तव्यहरू छन्। बरु, ती केवल पहिलो कोडको समायोजन हुन् नयाँ कोडको साथ बनाईएको र समान वेब ठेगानाहरूमा सुविधाजनक।
जर्मन क्लबको लागि पोर्टेबल अनुप्रयोगहरू धेरै समान छन् तपाईं आफ्नो टेलिफोन वा ट्याब्लेटमा अन्य बहुमुखी अनुप्रयोगहरू। तपाईं तिनीहरूलाई जुवा क्लब गन्तव्यहरू आफैंबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र पछि तपाईं अफिस हुनुभयो, आश्चर्यजनक रूपमा खेल्नुहुन्न।
जर्मन बहुमुखी सुव्यवस्थित गन्तव्यहरूको फाइदा भनेको उनीहरूको सेल फोनमा कोठा ओगटेको छैन, यद्यपि अनुप्रयोगहरूले गर्दछ। हुन सक्छ यो, यो धेरै भाग को लागी अनुप्रयोगहरु केहि अधिक खेल को एक जोडी ग्यारेन्टी, राम्रो किस्त रणनीति र उपयोगीता संग।
जर्मन अनलाइन क्यासिनोमा खेल्नुहोस्
ठीक छ, बहुमुखी जुवा क्लब - जाँच गर्नुहोस्। जर्मन क्लबको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - जाँच गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो जुवा क्लब प्रत्येक महिना - जाँच गर्नुहोस्। जर्मन क्लब को निर्भरता - जाँच। के आवश्यक बारे केही भन्न हुँदैन? केहि जर्मन अनलाइन क्लब मा खेल्ने बारेमा भन्नु हुँदैन?
सबै चीजहरू मानिन्छ, सुरू गर्नका लागि, तपाईंले आफ्नो क्लब छान्नुपर्नेछ। यो गर्नको लागि तपाइँले हाम्रो जर्मन जुवा क्लब सर्वेक्षणहरूको बिरूद्ध तपाइँको आवश्यकताहरूको भिन्नता गर्दै माथि सिफारिस गरेको रणनीति अनुसरण गर्नै पर्छ, र त्यसले तपाईंलाई छनौट गर्न सक्षम गर्दछ। वा फेरी, अर्कोतर्फ, हामीले पनि माथि प्रस्ताव गरेझैँ, तपाइँ केवल हाम्रो महिनाको जर्मन जर्मन जुवा क्लबहरू मध्ये एकमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले यो कार्य गरिसकेपछि, तपाईंले भण्डार / पछाडि तान्दा कुन कुन स्थापनापुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर छनौट गर्नुपर्नेछ। हामीले माथि भनेझैं असंख्य अनलाइन जर्मन क्लबले तपाईंलाई PayPal का साथ खाता भुक्तान गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्षम गर्दछ। यो वेबमा भुक्तान गर्नको लागि सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा सुरक्षित तरीका हो, यसैले जब तपाईंले यसलाई छान्नुभयो भने तपाईं सुरक्षित हुनुहुनेछ।
तपाईं त्यस्तै जर्मन अनलाइन जुवा क्लबहरूमा खेल्नु अघि पनि थप दुई चीजहरू गर्न आवश्यक छ। प्रस्तावमा प्रगति हेर्नुहोस् र पहुँचयोग्य खेलहरूमा पनि हेर्नुहोस्। जर्मन क्लबमा विविध प्रकारका विभिन्न नेटएन्ट खेलहरूको साथ साथै कस्तो प्रकारको प्रगतिहरू पहुँच योग्य छन् भन्ने बारे तल तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ।
कानूनी जर्मन अनलाइन क्यासिनो
जैसा कि हामीले माथि उल्लेख गर्यौं, त्यहाँ धेरै कम अनलाईनहरू छन् जुन दुर्बल र संकल्पित छन्। लगभग सबै जर्मन जुवा क्लबहरू पूर्ण रूपमा वैध छन्, त्यसैले तपाइँले अपराधीहरूलाई तपाइँलाई पैसा दिएर जोड दिनुपर्दछ।
हामी प्राय: जर्मन नेटएन्ट जुवा क्लबहरू सर्वेक्षणको लागि एक टनको विवरणमा उनीहरूलाई हाम्रो सर्वश्रेष्ठमा देखाउँदछौं, वा जब हामी उनीहरूलाई महिनाको सर्वश्रेष्ठ जुवा क्लबको रूपमा रिपोर्ट गर्छौं। यसैले, जब हामी यो गर्छौं, हामी निरन्तर उनीहरूको वैधानिकता, सुरक्षा र सुरक्षामा सम्राट लिन्छौं। हामीले हाम्रो साइटमा अवैध जर्मनीको क्लबलाई कहिले पनि राख्न सकेनौं, त्यसैले तपाईंलाई जानकारीमा ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ कि तपाईंले नेटएन्टकासिनोमा फेला पार्नुहुने सबै पूर्ण रूपमा वैध र वास्तविक छन्।
मेरो लागि सही जर्मन अनलाइन क्यासिनो कुन हो?
अहिले सम्म, हामीले जर्मन जुवा क्लबहरूका विभिन्न प्रकारका भेदाहरूमा गेन्डर लिएका छौं, यद्यपि तपाइँलाई कुनै पनि केसमा तपाइँले कुन क्लब खेल्नु पर्छ भनेर महसुस गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईंको लागि सही जर्मन जुवा क्लब के हो?
यस प्रश्नको जवाफ दिन, हामीले दुई चीजहरू पूर्ण गर्नु पर्छ। पहिलो स्थानमा हामी तपाईले खोज्नु पर्ने चीजहरूको खोजी गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईको क्लबमा ठुलो चीज खोज्नु पर्छ साथै केहि स्पष्ट तपाईसँग तपाई यस समय खोजी रहनु भएको थियो। दोस्रो, हामीले जर्मन क्लबले कस्ता हाइलाइटहरू प्रस्तुत गर्दछन् भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ। जब हामीले यो गरिसकेका छौं, हामी देख्न सक्दछौं कि कुन क्लबमा हाइलाइटहरू छन् जुन तपाईंलाई आवश्यक छ, र हामी यी लाइनहरू मार्फत तपाईंलाई जुवा क्लबसँग समन्वय गर्न सक्छौं जुन तपाईंको लागि सीधा छ।
हामी यस सर्तको प्रारम्भिक भाग गर्न सक्दैनौं; यो तपाईं केहि हुनुपर्छ
जर्मन क्यासिनो बोनस अपडेट गरिएको: सेप्टेम्बर 19, 2019 लेखक: Damon